Ọfịs gị, Adreesị gị, Ahịa gị | Martech Zone
Ikpeazụ n'oge okpomọkụ m malitere azụmahịa m oge. Ọ bụ njem dị oke egwu na sụrụ ngọngọ ole na ole mana ọtụtụ, ọtụtụ mmeri na ụzọ. Dị ka a na-eto eto azụmahịa, Ana m agbasi mbọ ike imezu ihe atọ:
Mezuo ihe ndị anyị na-eme site na ịfefe, na-emecha ya n'oge na n'okpuru mmefu ego. Nke a bụ nnukwu nsogbu, na nke anyị na-ezutebeghị. Na obere ego, na-elelị otu ọrụ nwere ike inwe a olu mmeghachi omume otú anyị na-arụ ọrụ ike na ukwuu na-atụ anya.
Iji ohere ndị itolite etolite. Anyị na-ajụ ụfọdụ ọrụ, mana ịghara ịhapụ itinye aka na nnukwu ọrụ. Anyị ga-enweta ihe onwunwe, anyị ga-ahụ ndị ọkachamara… anyị ga-arụ ọrụ ahụ. Achọghị m ịnakwere ọrụ na-etinye anyị n'ihe egwu - mana achọrọ m ịmalite ọrụ na-ama aka anyị. Nke a bụ igodo anyị na-eto n'ike n'ike ma na-eme nke a ezigbo azụmahịa.
Mee ihe niile enwere ike ime iji gosiputa ika anyi dika a ezigbo azụmahịa nke ụlọ ọrụ na ndị ahịa ndị ọzọ nwere ike ile anya mgbe ha na-achọ oge na-aga, itinye aka.
A ezigbo azụmahịa? Ọ bụrụ na ị maghị ihe m na-ekwu na nke ahụ, m na-ekwu na anyị ga-eguzobe azụmaahịa nke ndị ahịa anyị na-atụ anya ya na atụmanya ha nwere ike ịtụkwasị obi. Achọghị m ka atụmanya anyị na-eche na anyị nwere ike ịmechi ngwa ngwa ọnụ ụzọ echi n'ihi na m na-arụ ọrụ anya a ekwentị mkpanaaka na n'ụlọ m ọrụ.
Taa, abịanyere m aha mgbazinye ego maka otu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mbụ anyị. Ọ bụ na Okporo Marketzọ Ahịa 120. M họọrọ ebe ahụ n'ihi na gburugburu ya gburugburu, adreesị nke ya na Indianapolis, yana ọkachamara na nlele ya. Achọrọ m ka atụmanya anyị na ndị ahịa nwee ike ịbịa leta anyị n'ohere nwere ọtụtụ ụlọ (ime ụlọ ọgbakọ iri na abụọ, otu n'otu ala), nwere ohere ị ga-eto (ụlọ anyị nwere ike ịbata 12 ruo 4 nke ọma) ma dịkwa mma ile anya. M hụrụ oghere anyị họọrọ n'anya (anyị nọ na Suite 6 bido na Mee 940st).
Agaghị m agwa atụmanya m na-arụ ọrụ n'ụlọ ma tinye ajụjụ nraranye m nye azụmahịa ahụ ozugbo. Agakwaghị m eji Greenwood (n'agbanyeghị na m hụrụ obodo ahụ n'anya) na ire ahịa na akwụkwọ ederede, anyị bụ azụmaahịa dabere na Indianapolis.
Anyị nọ ebe a maka ogologo oge, anyị bụ akụkụ nke obodo ahụ, anyị na-atụkwa anya itolite azụmaahịa anyị na oghere a maka afọ ole na ole. Anyị ga-enwe oriri nnabata na ọnwa na-abịa ma nwee olile anya na ị ga - eme ya!
Tags: 120 e n'okporo ámá ahịagị n'ụlọngagburugburuDK New MediaIndiaụlọ ọrụ ndị Indianapolisihe nchetaụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụụlọ ọrụ
A nnukwu ekele gị na mgbalị gị niile. Enwere m ike ịgwa gị na m ga-atụkwasị gị obi na azụmaahịa m tupu ọtụtụ azụmaahịa ndị ọzọ amatara n'oge ahụ. Ekwenyere m, ịnwe ezigbo ọfịs na adreesị "ezigbo" nwere ike inyere onyinyo gị na ika gị aka n'enweghị obi abụọ. Ọ bụ ihe achọrọ iji kpọrọ ihe dị ka azụmaahịa n'agbanyeghị? Echere m na ọ bụ eziokwu karịa na afọ ndị gara aga, mana taa, a ga-anakwere ya dịka ọ bụghị ihe achọrọ. Ihe isi ike ahụ siri ike karị, mana ezigbo atụmanya kwesịrị ịbụ iji wepụta nsonaazụ, nke ị na-eme na # 1 na # 2. Anyị enwebeghị "ụlọ ọrụ" ihe karịrị afọ 4, ma ka na-eme ihe anyị na-eme ma na-elekọta ndị ahịa.
Ekele maka nnukwu njem! M na-emeso ụlọ ọrụ na-agabiga nke a oge niile. O nwere ike ibute obi na ike! Ahụbeghị m ụlọ ọrụ na-akwa ụta maka iweghara ụlọ ọrụ ha na ihe mbụ ọ mere maka azụmaahịa ha. I kwesiri ime ihe ndi ozo n'ime ọnwa isii ka anyi mara ebe o were gi!
Hụ ebe ọhụrụ gị n'anya! Nnukwu ihe ịga nke ọma nye gị, Doug.
Ekele dịrị gị n'ọfịs Doug! Amaara m na ị ga-enwe obi ụtọ ịlaghachi na ogbe ndịda!
Ekele! Ọfịs mara mma!
Ọ bụ ajụjụ m ga-elekwasị anya na afọ na-esote, Jason! Amaghị m na ọ bụ 'ihe achọrọ' mana ọ na-agbanwe echiche ụlọ ọrụ mgbe mụ na ndị ahịa buru ibu na-ekwu okwu. Ikike inwe ha n'ime ụlọ ime ụfọdụ nkwupụta echiche ma ọ bụ iwulite atụmatụ ga-abụ nnukwu nkwado! Echeghị m na ha chọrọ ịnọdụ na palọ m. 🙂
Daalụ Chris! Enwere m ekele maka okwu agbamume - oge ndị a bụ ụjọ!
Ekele maka oghere ọhụrụ ahụ. M hụrụ ụlọ ahụ n'anya. Ọ bụ kpọmkwem ihe obere ụlọ ọrụ ọfịs azụmahịa kwesịrị ịbụ. Jụụ, dị mma, ma dịkwa nso na ihe niile .. Kedu mgbe ị ga-enwe ụlọ gị mepere emepe ka anyị wee nwee ike imebi ya, n'ụdị?